Chipset Exynos 992 ga -abụ nke usoro Galaxy Note 20 ji mee ihe | Androidsis
Samsung na-eme atụmatụ ihe niile maka ọdịnihu nke mbido arụmọrụ ya ndị na-esote, nke na-abụghị ndị ọzọ karịa nke ihe ngosi 20 nke Galaxy Note.
Companylọ ọrụ ahụ ga-eju anyị anya nke kachasị mma na ngwaọrụ ndị ọzọ na usoro ndị a, nke ga-abụ ọdịiche dị iche iche nke Galaxy Note 20 na mbipụta dị elu nke ga-abata dị ka Galaxy Note 20 Plus. Enweela ọtụtụ asịrị banyere ndị a, mana ihe ohuru nke putaputara nwere na igwe okwu nke ha gha eji.
Ihe nhazi nke 20 Galaxy Note ga - abụ Exynos 992
Dabere na ọkwa ọhụrụ sitere na isi mmalite, Samsung na-arụ ọrụ na Exynos 992, Chipset dị elu nke ga-enwe njirimara dị elu na nkọwapụta teknụzụ karịa ndị anyị na-ahụ na Exynos 9825 site na ụlọ ọrụ, SoC nke ahụ bụ 7nm ma na-arụ ọrụ na ume ọhụrụ nke ruru 2.73 GHz.
N'ezie, anyị ga-anata ụdị mkpuchi site na Exynos 9825 ma ọ bụ Exynos 990 ya na chipset ohuru a. N'oge ahụ, enweghị ozi ndị ọzọ dị banyere ibe a nke na-enye anyị nchekwa banyere ndị ụlọ ọrụ South Korea zubere.
Ihe dị mma bụ na anyị nwere ike ịtụkwasị obi na ọ na-arụ ọrụ na chipset maka Galaxy Note 20, ọ bụ ezie na eziokwu bụ na ọ dịghị mkpa iji nweta ozi a iji wepụ ya. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya na Galaxy Note 10 ga-enweta ụdị ndị toro eto dị elu yana na ha ga-eme ya na August, ọnwa nke ọ ga-adaba na ụlọ ọrụ ahụ iji malite usoro ọhụụ ọhụụ ọhụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Exynos 992 chipset ga-abụ nke usoro Galaxy Note 20 jiri, Samsung na-arụ ọrụ na ya